IT Software Supporter | United Paints Group (UPG) Co., Ltd. ﻿
27.11.2018, Part time , Manufacturing
•	User မှပေးသော SAP Error/ Issue များကို Review and Analysis ပြုလုပ်ပေးရမည်။
•	ERP System Function အသစ်များအား users များအသုံးမပြုမီ testing ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ User များအား onsite training များပြုလုပ်ပေးခြင်း။
•	ERP System ပိုင်းနှင့်ပတ်သက်သော Delay, System Error များအား Basic Administrator နှင့် ချိတ်ဆက်၍ဆောင်ရွက်ပေးရခြင်း။
•	B.C.Sc, B.E (IT)
•	အသက်၂၁ - ၂၆နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။
•	IT Software ဖြင့်လုပ်သက် အနည်းဆုံး(၁) နှစ်ရှိရမည်။
•	ERP Application နှင့် IT System Analyst အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
•	Programming knowledge ရှိရမည်။
•	ရုံးချုပ် (ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်)တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။
• Salary is negotiableWe might provide you with uniform
Work location No. 174/188, 2nd Floor, Shwe Gabar Tower (II) , Bo Myat Tun Street, Pazundaung Township, Yangon
Job Function: IT Software Supporter
Job posted: 27/11/2018
Brand Executive (Rock Paint)
201 Days, Part time , Manufacturing
• Havearesponsibility to plan sales budget and commit to achieve this sales budget. • Support Rock Paint Alliance Dealers and communicate their feedbacks and concerns with Rock Paint. • Collect market information • Develop marketing materials, promotional materials and gift items for Rock Paint • Conduct sales promotions for Rock Paint • Arrange advertisings for Rock Paint • Solve technical and commercial problems for Rock Paint • Execute direct marketing for Rock Paint and search for new potential customers • With t ...
United Paints Group Co.,Ltd. သည် ဝန်ထမ်းများအပေါ် - > ရသင့်ရထိုက်သော ခံစားခွင့်များ၊ ရပိုင်ခွင့်များကိုပေးသည်။ > တိကျသေသပ်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုချမှတ်ပြီး အလုပ်ရုံအလုပ်သမားဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သည်။ > UPG သည် မြန်မာနိုင်ငံသုတ်ဆေးထုတ်လုပ်သူများတွင် ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် အတွက် ခေါင်းဆောင်ကောင်းတို့နှင့်အတူ တိုးတက်လှပသော အနာဂတ်ကို ချီလှမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အတူ လက်တွဲလုပ်ကိုင်သင့်ပါသည်။
United Paints Group Co. Ltd., is one of the most trusted brands when it comes to paints. Ever since its establishment in 1995, the company has developedawide range of products such as architecture paints, decorative paints, industrial paints, marine paints, wood coats, and other painting-related products. Afterafew years of the company’s birth, UPG became the leading paint manufacturer in Myanmar. The company continues to grow and enhance their products to meet their customers’ needs. Each paint was designed and developed after careful and thorough research and development processes. Thanks toahighly organized network of dealers, UPG products have been distributed throughout Myanmar. UPG is aware of their responsibility as the major supplier of painting products to te country’s industrial and end-users. With their innovative products and services, UPG continues to participate in the nation building endeavors, gain customer delight, and further grow in the regional market. UPG believes that innovative technology is the key to ensure products are reliable and will satisfy customers. The company strongly believes in thorough research and development especially since each customer is fromadifferent field withaspecific set of requirements. If you are someone who is willing to work inaplace where innovation is one of the core values, apply here at UPG!
• နှစ်ချုပ်၊ လချုပ်များကိုရေးဆွဲနိုင်ရမည်။ • Tax ကိစ္စများကိုကိုင်တွယ်နိုင်ရမည်။ • Payroll ကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ • Accounting Software, SAP စသည်တို့ကို သုံးနိုင်ရမည်။ အထက်ဖော်ပြပါစသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကိုဆောင်ရ� ...
•	စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများတွင် HSE နှင့်ပတ်သက်သည့် Inspection လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရမည်။ •	HSE လုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည်။ •	မတော်တဆ ထိခိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့နှင့် စစ်ဆေးခြင်းများလုပ� ...
• Inventory transaction များစစ်ဆေးခြင်း။ • Purchase Order Balance Update စစ်ဆေးခြင်း။ • Stock Transfer Order များစစ်ဆေးခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအားဆောင်ရွက်ရမည်။ • စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များပြီးဆုံးပါက Audit Finding ထုတ်ပေးခြင်း။ • Audit Finding အား action taken ပြ ...
• နေ့စဉ်ကုန်ချောဝင်ရောက်မှုအရေအတွက် မှန်ကန်မှုရှိ၊ မရှိအမျိုးအစားမှန်ကန်မှုရှိ၊ မရှိစိစစ်ခြင်း၊ နေရာချထားခြင်းများဆောင်ရွက်ရမည်။ • မိမိသိုလှောင်ရုံအတွင်း ပျက်စီင်္းမှု၊ လေလွင့်မှုမရှိစေရန် အတွက်နေ� ...
•	ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်သော document ကိစ္စများ လုပ်ဆောင်ခြင်း •	Custom Clearance တို့နှင့် ပတ်သက်သော document ကိစ္စများ လုပ်ဆောင်ခြင်း •	လိုင်စင်ကိစ္စများ၊ Shipping ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း •	SAP data entry ပြုလုပ ...
•	လက်ရှိ အသုံးပြုနေသော Raw နှင့် Quality တူသော ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များရယူခြင်း။ •	စမ်းသပ်တွေ့ရှိချက်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားရှိခြင်း။ •	ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကောင်းမွန်ရန် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း။ ...
•	Data Entry သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း။ •	ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းများ၊ မှာယူသည့် order စာရင်းများပြုလုပ်၍ဝယ်ယူခြင်း။ •	ဈေးနှုန်းများနှိုင်းယှဉ်စစ်ဆေး၍ ပစ္စည်းများဝယ်ယူရခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းစဉ်မျ� ...
•	Answering calls, taking messages and handling correspondence. •	Managing the daily / weekly/ monthly agenda and arrange new meetings and appointments •	Preparing and disseminating correspondence, memos and forms •	File and update contact information of employees, customers, suppliers and external partners •	Support and facilitate the completion of regular reports •	Develop and maintainafiling system •	Make travel arrangements •	maintaining diaries and arranging appointments •	managing databases •	liaising with r ...
• အိမ်သုတ်ဆေးလုပ်ငန်းသုံးကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့အားကြီးကြပ်ဦးဆောင်ခြင်း။ • အပတ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစာရင်းများပြုစုတင်ပြခြင်း။ • ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၊ Spare Parts များမှာယူမှုအတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ • ...
•	User မှပေးသော SAP Error/ Issue များကို Review and Analysis ပြုလုပ်ပေးရမည်။ •	ERP System Function အသစ်များအား users များအသုံးမပြုမီ testing ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ User များအား onsite training များပြုလုပ်ပေးခြင်း။ •	ERP System ပိုင်းနှင့်ပတ်သက်သော Delay, System Error များအား Basic Administrator ...
IT Software Supporter IT & Telecoms Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon United Paints Group (UPG) Co., Ltd IT & Telecoms jobs IT & Telecoms jobs IT Software Supporter Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Can you do overtime if you need?
Can you work under pressure situation?